AMBATONDRAZAKA - KAMIAO TRA-DOZA : Olona telo maty tsy tra-drano, am-polony naratra mafy
Tsy mampilaza tokoa ny loza rehefa ho tonga fa dia fianakaviana avy nandevina indray teto no niharan-mboina nahatsiravina ka namoizana aina mihitsy. 6 octobre 2017
Tao Ambohitava Kaominina Manakambahiny Avaratra Distrikan’ Ambatondrazaka indray afak’omaly atoandro no nisehoana lozam-pifamoivoizana ka olona miisa telo hatreto no fantatra fa maty tsy tra-drano. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana dia fianakaviana avy nandeha nandevina tany Ambohidelahy handeha hody any Bejofo io kamiao io no nivadika ary nandriaka dia nandriaka ny rà.
Niala lavaka tao anaty tetezana ilay mpamily no nivadika ambony ambany raha ny fanazavan’ireo velon’aina soa aman-tsara. Olona teo amin’ny telopolo teo no nentin’ilay fiara ary maro ihany koa ireo naratra mafy ka tonga dia nalefa tao amin’ny Hopitalibe an’Ambatondrazaka avokoa ireo taorian’ny loza. Ny borigady ao Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao no misahana ny famotorana ny raharaha.